Ngwa 630A Ndị na-emepụta USB na ndị na-enye ya | China 630A USB Ngwa Factory
15Kv630ADeadbreak T Fore njikọ
Anhuang ọkachamara na Deadbreak T Fore Connector, anyị na-enye oke mma Nwụrụ Anwụ T T njikọ. Ngwa: ● Maka njikọ nke polymeric cable na ndị na-agbanwe agbanwe, ihe nkedo ọkụ, motọ na akụrụngwa ndị ọzọ nwere njikọ na-ekewapụ edozi. ● Maka nrụnye n'ime ụlọ na n'èzí. Voltage Nhazi usoro ihe ruru 24 kV. Current Na-aga n'ihu ugbu a 630 A (900 A bufee maka awa 8). Partic Ihe omuma: - Polymeric cable (XLPE, EPR, wdg) - Copper or aluminom conductors - Semiconduc ...
12-24kV 630A Abụọ Akụkụ Bushing
Anhuang ọkachamara na Deadbreak T azụ njikọ, anyị na-enye elu mma Deadbreak T N'azụ njikọ. General ： 630A Nwụrụ Anwụ Typedị ctiondị Ngwakọta Ezubere maka Ngalaba Ike USB na Ngalaba Ike USB. Okwesiri maka igbe alaka, gbara okpokoro ike nke uzo Europe, ma nwee ike ijikọ ya na 630A Shield Fore Connector. Ọdịnaya Kit: ● breakdị Mkpokọta ● Ntinye akwụkwọ ntinye akwụkwọ ● Akwụkwọ Asambodo Ngwa Ihe Nlereanya: Nkọwa nkọwa ...
Ngwa Bushings Fanye
Anhuang ọkachamara na ngwa ngwa ngwa ngwa, anyị na-enye nnukwu mma ngwa ngwa ngwa. Ezubere ： 630A Ngwaọrụ Ntinye Ntugharị maka Europeanlọ Ọrụ Ndị Ala Europe, Ike Gburugburu Powerlọ Ọrụ, Ejiri ya na inlọ Ọrụ Ọdịdị Europe nke jikọtara ya na voltage dị elu. A bushings nwere ike jikọọ na ndị nwụrụ anwụ ezumike USB njikọ. A na-akpụzi bushing ndị a site na iji sọlfọ dị elu gwọọ nke Epoxy Resin Rubber. Kit ọdịnaya ： l ngwa Bushings Fanye l ...
A TGZ-1225kV 630A Ikuku na-agba ọsọ
Anhuang pụrụ iche na Air Bushing, anyị na-enye elu mma Air Bushing. Ezubere ： 630A Ikuku Ikuku maka Europeanlọ Ọrụ Ndị Ala Europe, Ike Gburugburu ,lọ Ọrụ, Ejiri ya na Powerlọ Ọrụ Ọdụ European nke dị na Europe na-ejikọ ya na nnukwu voltaji. Arụnyere na mkpuchi mkpọ iji jikọọ Typedị 630A njikọ maka 630A. A bushings nwere ike jikọọ na ndị nwụrụ anwụ ezumike USB njikọ. Ndị a bushing a mere site na epoxy Resin na ọla kọpa mmanya na ezi n'ibu na ọkụ Njirimara ....
Ihe ndi mmadu
Anhuang ọkachamara na Integral Dead break Bushing, anyị na-enye ezigbo mma Integral Deadbreak Bushing. 12kV 630A gwara mmanụ nwụrụ anwụ ezumike Bushing Ezubere maka Blọ Ọrụ Ngalaba USB na Sf6 Switch. Enwere ike iji njikọ njikọta, dịka 630A T na T-11 njikọta ndị nwụrụ anwụ nwere ike iji bushing ndị a. Ọ bụ Epoxy Resin mere bushing a. Na uwe mwụda na-eme ka Ndị Nwụrụ Anwụ agbaji Rotatable Nri-thru Bushing nwere ike iji mee ihe ka mma. Ihe di n'ime: ● Integral Deadbreak Bushing ● Covering cap ● Installation Ins ...
A SJT 15630A Cross njikọ
Anhuang ọkachamara na Cross njikọ, anyị na-enye elu mma Cross njikọ. Ngwa: l Njikọ na casing switchge nwere ike nweta n'etiti otutu switchgear njikọ. l Voltaji usoro: 8. 7 / 15kV \_ 12 / 20kV. l Na-aga n'ihu gosiri ugbu a: 630A \_ 1250A. Njirimara: l Mgbe ejikọtara ya na ụdị C bush, a na-enye njikọ zuru oke na nkewapụ nkewa zuru oke. Unipolar, nkwụnye imewe. l Busbar si gburugburu ọla kọpa mkpanaka （tube) mejupụtara, elu comp ...
A DJT 5630A T nkwonkwo
Anhuang ọkachamara na T-nkwonkwo, anyị na-enye nnukwu nkwonkwo T. Ngwa: l Njikọ na ihe nkedo ihe nkedo nwere ike nweta n'etiti otutu njikọ njikọ. l Voltaji usoro: 8. 7 / 15kV \_ 12 / 20kV. l Na-aga n'ihu gosiri ugbu a: 630A \_ 1250A. Njirimara ： l Mgbe ejikọtara ya na Cdị C bushings, a na-enye njikọ zuru oke na nkewapụ nkewa zuru oke. Unipolar, nkwụnye imewe. l Busbar si gburugburu ọla kọpa mkpanaka （tube) mejupụtara, elu mejupụtara silicon ...
Anhuang ọkachamara na ngwa ngwa, anyị na-enye nnukwu mma ngwa Bushing. General: 35kV 630A ngwa bushing e mere maka European ụdị USB Alaka Cabinet, Power gbara ọkọnọ Cabinet, Jiri na European ụdị cable alaka kabinet ejikọta na elu voltaji na ifufe ike substation. A bushings nwere ike jikọọ na ndị nwụrụ anwụ ezumike USB njikọ. Ndị a bushing mere epoxy Resin na ezi n'ibu na ọkụ Njirimara. Voltaji Rating: Nkọwa Paramete ...
Anhuang ọkachamara na 630A / 1250A Busbar, anyị na-enye Busbar dị elu. General, ： Bus ogologo L na abụọ mgba ọkụ gia akụrụngwa casing center anya dị ka ndabere, mgbe iwu na-enye kwa; ma ọ bụrụ na ụgbọ ala Ogologo dị ka ndabere, biko ezipụta. Informationtụ Ozi ： Nkọwa Okwu Nke 12kv 630A / 1250A Bus Bar AH MX-12/630/1250 24kv 630A / 1250A Bus Bar AH MX-24/630/1250
Type Touchable Front Connector
Anhuang ọkachamara na connetype metụrụ n'ihu njikọ, anyị na-enye elu mma π ụdị emetụ n'ihu njikọ. General ： π Type metụrụ n'ihu njikọ a na-eji na mgbanaka netwọk n'ihu igbe, USB alaka nke igbe ma ọ bụ igbe na-aghọ isi usoro mgbanaka net usoro, dị ka na na na USB njikọ. Nwere ike jikọọ 630A nkwụsị na site mgbe ga-emetụ njikọta Nchikota na-eke ọzọ ejikọrọ circuit. Ihe akara akara nke ụdị ụdị T ụdị a na-emetụ aka bụ 630A, tinye ya na 25-300m ...
35kV 630A T USB njikọ
Anhuang ọkachamara na T USB Connector, anyị na-enye njikọ dị elu T USB Connector. General ： 35kV 630A T Cable Connector na-enye njikọta zuru oke na njikọta submersible zuru oke mgbe ejiri ya ma ọ bụ plọg kwesịrị ekwesị. Maka njikọ nke eriri polymeric na ndị na-agbanwe ọkụ, ihe nkedo ọkụ, motọ, na akụrụngwa ndị ọzọ nwere njikọ na-ekewapụ iche. Nhọrọ akara nyocha ikike na-enye ohere maka nlele dị mfe nke ọnọdụ sekit ma ọ bụ ntinye nke akara ngosi. Ndị a 36kV 630A T USB Co ...